शरीरको तौल लसुनको सेवनबाट कम गर्न सकिन्छ ? हेर्नुहाेस.... - नयाँ कुरो
शरीरको तौल लसुनको सेवनबाट कम गर्न सकिन्छ ? हेर्नुहाेस….
११ जेष्ठ २०७८, मंगलवार ०६:२९
काठमाडौं ।। लसुन नेपालीहरुको भान्सामा सजिलै पाईन्छ। लसुन धेरै पौष्टिक तत्वबाट भरिपूणर् हुन्छ। भिटामिन सी, बी६, फाइबर, म्यागनीज, क्याल्सियम आदि तत्व लसुनको सेवनबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले लसुनलाई पावर हाउस भनिन्छ।
थोरै तातो पनि लिनुहोस्। त्यसमा एक चम्चा कागतीको रस र १/२ पोटी लसुन थिचेर राख्ने र यसलाई मिसाएर पिउने। यो ड्रिंकले तौल कम मात्र नभई फ्री रेडिकल्सले हुने विभिन्न ड्यामेजबाट पनि बचाउँछ।
बिहान खाली पेट लसुन या लसुन पानी खायौँ भने यसको अधिक लाभ मिल्छ। किनभने पकाएको भन्दा काचो लसुन बढी फाइदाजनक मानिन्छ। बिहान २/३ पोटी लसुन पानीसँग खान सकिन्छ।